တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	(၆၁)ကြိမ်မြောက်မွန်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ. ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်	August 15, 2008
တိုင်းရင်းသားအသံ(၆၁)ကြိမ်မြောက်မွန်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ. ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်(၆၁) ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသား တော်လှန်ရေးနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (ဗဟို)
နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းအရ သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး ပေါ်လစီဖြင့် အပစ်ရပ်ထားသော လက်နက်ကိုင် လူမျိုးစု တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် ရှေ့နိုင်ငံရေး အသစ်တစ်ရပ်အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်ရမည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ တော်လှန်ရေး အင်အားစုများ မည်သို့ဆက်လက်ရပ်တည် စခန်းသွားမည်ကိုလည်းကောင်း၊ မိမိလူထုအတွင်း မည်သို့ နိုင်ငံရေးအရ ခင်းကျင်း ပြင်ဆင်စုဖွဲ့ရမည်ကိုလည်းကောင်း၊ တပ်မတော်အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်တွင်တည်၍ အဆုံးအဖြတ် ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မွန်အမျိုးသား ပြည်သူအပေါင်းတို့၊ ပါတီရဲဘော်အပေါင်းတို့ – မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် မိမိ၏ မူလရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စုနှင့် ပါတီစုံ စီမိုကရေစီ ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် မဟာမိတ် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ အနိမ့်ဆုံး ဘုံလုပ်ငန်းစဉ် ရှာဖွေပြီး ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လက်လျှော့ အရှူံးပေးသော တော်လှန်ရေး၊ လက်တွေ့မဆန်သော အတွေးအခေါ်များနှင့် လုပ်ရပ်များကို ဆန့်ကျင်ကာ တော်လှန်ရေး အသီးအပွင့်များ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ရန် မဖြစ်မနေ ကြိုးပမ်းသွားရမည်ဖြစ်သည်။
မွန်အမျိုးသားများ သွေးစည်းကြစစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ကြမွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်မှု တော်လှန်ရေး အောင်ရမည်
၁၃၇၀ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်2008 ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (16) ရက် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ